Barcelona Oo Soo Saartay Liiska Shanta Weeraryahan Ee Suuqa Ka Dooneyso
HomeHoryaalka SpainBarcelona oo soo saartay liiska shanta weeraryahan ee Suuqa ka dooneyso
February 21, 2021 Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay diyaarsatay shan xiddig oo u sharaxan xilli ay isku diyaarinayso in ay weeraryahan cusub keento kooxda inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Kooxda reer Catalonia ayaa u ogolaatay Luis Suarez inuu si bilaash ah uga tago Camp Nou sanadkii hore, taasi oo sameyn xoogan ku yeelatay.
Sida laga soo xigtay The Mirror , Ronald Koeman kooxda ayaa aqoonsaday shan weeraryahan waxana hogaaminaya Xidiga Kooxda Borussia Dortmund Erling Braut Haaland.
Mustaqbalka Haaland ayaa hada ah mid si weyn loo hadal hayo, iyadoo kooxo dhowr ah oo ay ku jirto Real Madrid la rumeysan yahay inay si aad ah u doonayaan saxiixa laacibka reer Norway.
Waxaa liiska ku jira labada ciyaaryahan ee Romelu Lukaku iyo Lautaro Martinez xidiga Lyon Memphis Depay iyo Manchester City xidigeeda Sergio Aguero.
Inter ayaa la sheegayaa inay ka go’an tahay inay ceshato labada ciyaaryahan ee Lukaku iyo Martinez, laakiin Memphis iyo Aguero ayaa qandaraaskoodu ka dhacayaa kooxahooda dhamaadka bisha June.
Dhanka kale Lionel Messi ayaa weli lala xiriirinayaa inuu ka tagayo Camp Nou, ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Argentina ayaa la filayaa inuu raadsado kopx cusub ka dib markii uu dhacayo qandaraaskiisa.